ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေး, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့, မြန်မာ့ကျန်းမာ
ကျန်းမာရေး - ကျန်းမာရေး, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့, မြန်မာ့ကျန်းမာရေး, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိတ်ကျန်းမာရေး, မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိပ် ခ်ျ အိုင်ဗွီအေအိုင်ဒီအက် စ်, ကြမ်းပိုး ..
ကိုယ်ခန္ဓာ အဆီတွေတိုးပြီး နေရ ထိုင်ရတာ သက်တောင့် သက်သာ မရှိလှဘူးလို့ ညည်းနေတတ်ကြပေမယ့် အစားအသောက် ၊ အနေအထိုင် ကိုတော့ ဂရုမစိုက်မိကြပါဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျအောင်ဆိုပြီး စားသင့်တဲ့ အစာပမာဏထက် ပိုမိုလျော့စားတဲ့အခါမှာ လုံလောက်တဲ့ အစာအဟာရ မရရှိခြင်းကြောင့် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်။ ကျန်းမာအောင် အစားစားနည်း ၁၀ ချက် ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ နိုးထနိုင်ဖို့အတွက် ဒီနေ့မှာ အဟာရပြည့်အောင် လုံလောက်အောင် စားပါ။. နို့ခရင်မ် တွေအစား ဒိန်ချဉ်ကိုသုံးပါ။. အစာစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျဖို့ အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စားပါ။. အသားများကို မီးဖုတ် ...
သတ ခ ပ သင က န မ ရ န င ည ည တ စ စ သ က န ထ င တတ ခ င သည ရ ဂ ဘယက တ ဆ န င သည ပ င အသက ရ ည ရ ရ ည က င လည ဖ စ ရက က န မ ရ လမ ည န မ က
က န မ ရ ဝန က ဌ န သည မ န မ န င င က န မ ရ ဆ င ရ က စ စရပ မ ဆ င ရ က သည ဝန က ဌ န ဖ စ သည သမ မတဦ ထင က အစ ရလက ထက တ င က န မ ရ
ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န သည မ န မ န င င တ င ပထမဦ ဆ ပ ည သ က န မ ရ န င သက ဆ င သ တက ကသ လ ဖ စ သည ခ န စ တ င စတင ဖ င လ စ ခ ပ
အခ ခ က န မ ရ တက ကသ လ မက သည မ န မ န င င က န မ ရ န င အ ကစ ဝန က ဌ န အ က ရ ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ ပ မက တ င ဒ သက
က န မ ရ န င အ ကစ ဝန က ဌ န အင ဂလ ပ Ministry of Health and Sports သည ခ န စ မ လ ရက သမ မတဦ ထင က အစ ရလက ထက တ င ဖ စည ခ သည
ကမ ဘ က န မ ရ အဖ World Health Organization, WHO သည က လသမဂ ဂ UN အထ အ ဂ င စ တစ ခ ဖ စ ပ အပ ည ပ ည ဆ င ရ ပ ည သ က န မ ရ အတ က ည န င ဆ င ရ က ရ
ပ ည သ က န မ ရ ဆ သည မ လ အဖ အစည အသင အဖ မ ပ ည သ ပ င န င ပ ဂ ဂလ ကပ င လ မ အစ န င တစ ဦ တစ ယ က ခ င စ စနစ က သ အ ထ တ က ပမ မ
ကမ ဘ က န မ ရ န က န စ စဉ ဧပ လ ရက န တ င ကမ ဘ က န မ ရ အဖ ဦ ဆ င မ ဖ င က င ပလ ရ သည ခ န စ တ င ကမ ဘ က န မ ရ အဖ က ဦ ဆ င မ ဖ င
ပ င က န မ ရ အဓ ပ ပ ယ ဖ င ဆ ခ က က အမ က လက ခ ထ က သည မ ကမ ဘ က န မ ရ အဖ ပဋ ဉ ဏ စ တမ ပ အတ င ပင ဖ စ သည ထ အဓ ပ ပ ယ ဖ င ဆ ခ က မ
က န မ ရ ဦ စ ဌ နသည က န မ ရ ဝန က ဌ န လက အ က တ င ရ ခ ပ ခ န စ တ င က သရ ဦ စ ဌ နန င ပ ည သ က န မ ရ ဦ စ ဌ နအဖ စ ပ င လ ဖ စည ခ သည
မ န မ က န မ ရ စ င ရ က မ သည က င မ န မ မရ ပ စစ အစ ရသည န င င ဂ ဒ ပ GDP က မ အထ သ က န မ ရ အတ က သ စ သည က န မ ရ
ကမ ဘ က န မ ရ အဖ အစည WHO မ စ တ က န မ ရ ဟ သည က လ တ င လ တ င မ မ မ တ စ မ ရည ရ သည အတ င န ထ င က င မ န မ အခ အန တ င ဘဝ စ တ ပင ပန စရ မ က
က န မ ရ ဦ စ ဌ န က သရ သည က န မ ရ ဝန က ဌ န က န မ ရ ဦ စ ဌ န လက အ က တ င ရ ခ ပ ခ န စ တ င က န မ ရ ဦ စ ဌ န က က သရ ဦ စ ဌ နန င
တည ရ သည ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည ရ ဖလ က က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ကတ င တ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည Place codes Pcodes Myanmar Information
ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည ဝင မ င က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င လ ဂ န ပ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည Place codes Pcodes Myanmar Information
ရ န ရ က တ မ ဖ စ သည ပ ဇ န မ င က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ကမမ င က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
အရပ အခ မ က က တ င ဖ စ သည က က က င က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ဝ က က က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
အလကခ မ ဝ င သည ဧကက ယ သည မ ဝ င က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င လ ဂ န ပ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည Place codes Pcodes Myanmar Information
သင တစ န တ တ င မည သည အစ အစ မ က ရ ခ ယ လ က ခ င သည သင က န မ ရ အသက ရ ည ရ အတ က အလ န အရ က လ ပ သည ထ အပ င ခန ဓ က ယ အခ အစ က
လ ဦ ရ စ စ ပ င ဦ န ထ င သည ဝ သ ခ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ဝ က က က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
လ ဦ ရ စ စ ပ င ဦ န ထ င သည တ တ ဦ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ဝ က က က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
က န မ ရ က က သစ ရ ဓဓဓမ မ မ ဓ GAD, Feb 2011
လ ဦ ရ စ စ ပ င ဦ န ထ င သည န က ထ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ကတ င တ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည Place codes Pcodes Myanmar Information
န ထ င သည အလကခ ရ ပ သည ဧက က ယ ဝန သည ရ ပ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ဝ က က က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
တ ခ န တ င တ တ သည က သ လ န င သည တ ခ န တ င က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င က ဆ ပ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
တည ဆ က ထ သ ဝ ဆန တ တ သည က သ လ န င သည ဝ ဆန က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င က ဆ ပ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
အလကခ ဘ က လယ သည ဧကက ယ ဝန သည ဘ က လယ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င ကတ င တ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
အရ တ မ ဖ စ သည ခ န စ တ င ကမ ဘ က န မ ရ အဖ မ ပ သ ဆ ဆ က ဝ က န မ ရ ဆ ရရ ခ သည တ င တန သ သန ပ ဆရ တ ဦ ဥတ တမ ပန ခ ဆရ က
က က င သ သ က ရ သည မ သလ တ က လက က န မ ရ ဌ နခ တ င က ဆ ပ က လက က န မ ရ ဌ န တည ရ သည မ စ မ ရ င က ရ စ မ က န တ င ပ ဝင သည
တ က နယ ဆ ရ င ခ မ ခင န င ကလ က န မ ရ ဌ န တစ ခ မ နယ က န မ ရ ဌ န တစ ခ က လက က န မ ရ ဌ န ခ က ခ န င က လက က န မ ရ ဌ နခ ခ ရ သည ပ လ မ နယ အန
ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီဆိုရင် မိခင်ဘေး အန္ကရာယ် ကင်းဖို. မွေးလာတဲ့ ကလေး လည်း ကျမ်းမာဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုန်းမှာ ၊ မွေးဖွားနေတုန်းမှာ ၊ မီးတွင်းမှာ အရေးတကြီးလုပ်စရာတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်အပ်တာ ဟာ အဲ့ဒီ အရေးတကြီးလုပ်စရာ တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအလှုပ်နည်းလျှင်. မျက်စိပြာ၊ အလွန်အော့အန်နေလျှင်. မခံမရပ်နိုင်အောင် ဗိုက်ဆက်တိုက်နာလျှင်. ရေဆင်းလျှင်. ဝမ်းဗိုက်၊ လက် နှင့် မျက်နှာများ ဖောရောင်နေလျှင်. သွေးဆင်းလျှင်. ဖျားလျှင်. ခေါင်းအလွန်ကိုက်လျှင်.